Lapho ukuthenga umuzi omusha, njengoba umthetho, ngokushesha baqala ukulungisa - ngisho noma uthenge esisha. Futhi ikakhulukazi uma indlu kuthengwa emakethe yezindlu lesibili noma baye ngofuzo kubazali babo. Ukulungisa ezindlini ngezandla zabo noma ngosizo ochwepheshe - cishe ngokoqobo esingenakugwenywa iyiphi lisha ezweni lethu. Ifomu yesimanje kwezindlu unamathele ukufakwa okwakhiwa ngalo la mabhodi ngodonga, spotlight, multi-level Uphahla lwangaphakathi.
izinkinga ezingase zibe khona
Phansi ezindlini ezifana - udaba ehlukile. Ngo iphaneli izindlu ezindala ezihlukahlukene idivayisi alihlukile. Kujwayele linoleum noma amabhodi phezu izibopho elula ukhonkolo. ukulungisa phansi Khrushchev isidingo ngokuvamile ngokushesha ngemuva kwalokho kukhokha.
Uma uthola leli phansi, kubalulekile ukuzama bushelelezi kwamanzi futhi ukuqeda uthuli okuphakade. Namuhla, ethafeni uthayi ubudala kuya emabhulashini phansi bese uhlela entsha, nakakhulu ukuze nokushoda zokwakha ukuthi. Minor ukukhubazeka kungenziwa lilungiswe - semfene putty Tile ingcina.
Futhi uma une izinkuni emabhilidini? ekugcineni enamathela amabhodi libangela ukuqhuma kwegilo ngenxa friction ngokumelene nezinye floorboard ngamunye ihlaba umkhosi ntswininiza. Ngokuvamile abanikazi ozama ukukulungisa screwing amapulangwe ngezikulufo noma ukuthelwa phakathi yamba izimbobo glue. Izinyathelo ezinjalo akuzona njalo ngempumelelo. Lapho uhlela ukulungisa phansi Khrushchev, zilungiselele nobunzima ezithile.
Ngezinye izikhathi isidingo nokubuyiselwa izibuya okhuni kwenzeka ngenxa yezikhukhula, lapho kwenzeka ngokusebenzisa iphutha lakhe siqu noma ngenxa omakhelwane ngenhla. Uma phansi spoilt sina, kuyacaca ukuthi ukulungiswa ezinkulu kungagwenywa cha.
Ungabona esitfombeni, iphansi lokhuni "Khrushchev" ukulungisa.
Ngakho, masenze konke esingakwenza ukulungisa. Lapho uhlela ke, kufanele unqume ukuthi udinga - ukuletha phansi kwezinkuni isimo saphezulu, noma ukusebenzisa njengendlela base elingenamikhono ngaphansi ungqimba aliqede. Lokhu kuzokwenza ukuthi noma ngabe wena uyobe ukulungisa phansi ekhona noma ngokuphelele esikhundleni salo. Mhlawumbe nje olukwazi ukuqeda ayangena phansi lokhuni.
Umsebenzi iqala wokuhlola, futhi uma kudingeka ahlukanisa. I floorboards kufanele baqonde ngokucophelela ukuhlola isimo. amabhodi lilimale ewusizo uma kusetshenziswa enamathela entsha.
Khona-ke udinga indawo ukuba benze kanjalo umsebenzi futhi uthenge impahla ngobungako kwesokudla. uhlu konke uzoya ukulungisa phansi, intengo kanye nobungako Oku-echaziwe. usayizi adingekayo imigoqo 50 kuya 50 cm, a floorboard futhi ifilimu polyethylene njengesithiyo ububi ngentukuthelo. Lapho silungisa phansi ukwahlukanisa yakhe kungenzeka, okuyinto ebaluleke for the izitezi zokuhlala, ezindaweni ezibandayo ikakhulukazi. Njengoba heater esetshenziswa amaminerali uvolo. Bafanele okuqinile, ugcine ukuma. On amaphakheji ezifana yezimbiwa uvolo njalo ecacisiwe usayizi, ngakho-ke kulula ukubala lemali edingekayo.
Ekuqaleni lenzelwa ukulungisa phansi polyethylene ifilimu, okuyinto web impahla kumelwe aye nomunye ngo-20 cm. Lokhu kwenziwa ukuvimbela ingress umswakama isikhala aphansi.
Mineral Uvolo sibe yimichilo cishe 3-4 amasentimitha obukhulu ehambisana kanye azungezwe igumbi ngalinye. Kungani ukufaka nemigoqo ibanga engaphansana nje kwengu-ububanzi amabhodi ukwahlukanisa. Flatness ukulawula kulungiselelwa ezingeni. Phakathi kwabo ibekwe ukwahlukanisa amapuleti ukuthi kufanele uvumelane snugly phakathi calandze phakathi imigoqo.
Njengoba kwenziwa kwamapulangwe, kuye ngokuthi ngabe kuyinto ungqimba anolaka noma lokugcina. Uma udinga qondanisa phansi lokhuni ubudala, walala phezu enamathela entsha, ibhodi kungaba ukunwetshwa ngilokhu ezincane. Khona-ke isinyathelo esilandelayo is emakhiyubhi amashidi ngamapulangwe phezulu chipboard noma ipulangwe njengoba base Ngaphansi nje kwalolo ngwengwezi zokuhlobisa. On ephakeme esihlokweni izithombe - izibuya okhuni elilungisiwe.
Uma creaking floorboards
Inqobo nje uma kungenzeka yini ukubhekana nenkinga creaking floorboards, ukukhweza kubo phezu ngezikulufo. Uma amboze amabhodi phansi phezulu engafuni uyinaka izinga yabo. Badinga ukuqiniswa ngangokunokwenzeka ngaphezulu uvalwe kuqondaniswe phezulu. Izinto kumele kube yomile.
Ngemva kokubekela ibhodi ingumhlabathi, nezikhathi ngezinye izikhathi eziningi, ekufezeni flatness ekahle. Ngaphambi inqubo ukugaya kudinga proshpaklevat igebe wokugcina osele. Okunjalo sanded futhi varnished izibuya okhuni bheka ehlonishwa kakhulu futhi zanamuhla.
Uma isizathu kwaba omiswe wesiko, amapulangwe kufanele ihlolwe ukuze amandla - eguqa futhi creaking akufanele kube. Ungase udinge ubuyele eceleni amabhodi futhi ngaphezu kwalokho uzilungise nge ngezikulufo. isinyathelo okwalandela - putty imifantu nokusasamba engajulile. Akubizi nokunokwethenjelwa inketho - putty acrylic for izinkuni. Amathuluzi uzodinga kuphela trowel. Ngemuva omiswe bushelelezi out zonke izindawo isicelo putty.
Imifantu kwalungisa phansi lokhuni?
Lungiselela i phansi ezindala zamapulangwe ngaphansi isembozo phansi kungaba ngezindlela eziningi. Ngokwesibonelo, ukulungiselela inhlanganisela sawdust kanye nokuqondanisa PVAc noma ukuthenga yamathebhu ngomumo eyenziwe. Ungasebenzisa screed esezingeni isihlabathi usimende. Lokho okubizwa ngokuthi i -self-yokululama ukuxubana lisetshenzisiwe ehlwengekileko futhi ukulungele isicaba ngu umhlahlandlela beacons. Kodwa le ndlela has ethile - eside iphele nini izingoma kakhulu.
Ngokuvamile izici ezihambisana nge amabhodi fissuring ivela emoyeni elincane ukubaluleka. Esinye isizathu - misfolded enamathela lags ukusonteka. Ukuthola imbangela isici kungaba uzimisele kuka ukulamula ayangena phansi lokhuni.
Lapho izingodo iphutha
Uma usola ukuthi imbangela ntswininiza - isici lags isheke kungenzeka kuphela ngokususa kokususwa enamathela. Amabha Langaphambilini bahlolelwa ukuqina, langakufanelekela ukuba ukushintshwa. Khona-ke walala ebhodini futhi aqine nemigoqo. Khona-ke kungaba umehluko omkhulu ukuphakama (kufika ku-amamilimitha angu eziyishumi). Qondanisa ibhodi, ungasebenzisa Planer.
Inhlanganisela ngoba uphawu izimbotshana ububanzi ekulungiseleleni ukuxuba sawdust nge PVA glue. Ukwakheka lishe laba ngumlotha isetshenziswa ezindaweni oyifunayo, emva omiswe, kuza esiteji ukugaya. Imifantu futhi kungenziwa egcwele amagwebu, Foam izinsalela lapho, emva omiswe, usike evamile ehhovisi ummese. Ngemva kwalokho, bonke ubuso icutshungulwe sealer acrylic.
Ngakho, siyabona ukuthi ukukhetha lokho ukulamula ayangena phansi lokhuni, khona kwanele. Ngokwesibonelo, nokuqedwa imifantu ezinkulu zingaba ngehhanisi, lapho ukwakheka ingcina liyadingeka. Uma ukuqhekeka ezincane kufanele uthenge primer acrylic futhi sealer phansi, kanye betonokontakt. Ekuqaleni, umqhewu benikana inhlabathi ke betonokontaktom (lapho ebusweni iba anolaka), lwefilakisi elingabhuliwe ke avimbekile noma donsa elifakwe nge sealant. Ngemva iphele le tsiklyuetsya phansi.
Enye indlela yokulungisa
Futhi kuka ukulamula ayangena phansi lokhuni? Uma ungafuni izibuya perestilat, ungakhetha indlela elula. Zama amabhodi zashkantovat ndawonye. Indlela zakudala kuzodinga sokuprakthiza, sokuprakthiza eside, isando, telunyawo futhi dowels - eside, mncane ngezinduku nge round sigaba.
Ukusebenzisa izimbobo sokuprakthiza kuthiwa yamba e floorboards angomakhelwane i-engela 45 degrees. Ngamunye wabo kufanele kuqale kwelinye ipulangwe futhi ukuqeda kwenye. Kuyinto dowel okhandiweyo, ngaphambili ukusakaza nge ingcina. ingxenye yayo ophumile bagawula zalungisa ezishaywayo. Imbobo is yamba eduze Kuhlehliswe cishe ikota yebahlali imitha kusukela amabhodi, dowels kukhona perpendicular nomunye, nokunye ukuqedela ukuqinisa.
A more indlela amuva kuhilela khona nezikulufi self-evunyelwe, kanye sokuprakthiza ekhethekile, okuyinto inqwaba emgodini bonyana batshidze amakhanda abo. Ngesikhathi sigaba sokugcina aqede konke semfene.
Ukugcwalisa izikhala phansi izinkuni kungenziwa ezivezwa okuthiwa izindlela soft futhi kanzima. Ukuze Twine ezithambile esetshenziswa (mhlawumbe zemvelo), futhi polymer ingcina, nesigaxa lokhuni kanye nesando. Twine pre-ofakwe glue ke usebenzisa isando kanye nesigaxa sifakwe phakathi amabhodi. Ngemva polymerization, Yesigcilikisha (cishe usuku olulodwa) semfene asele esishunyekiwe yamathebhu.
Inzuzo ye-ingcina ezinjalo kuba umswakama waso. Ngisho nalapho ingase ibe ezomile, igebe ayisekho uyanda. Mayelana ngosuku kuyadingeka ukuhlanza kwamanzi, ungaqala Umbala.
Hard ukubekwa uphawu indlela kudinga amathuluzi anjenge Planer, isando kanye handsaw. kwamapulangwe ezincane sokhuni Basaha inombolo oyifunayo amagejambazo ububanzi okuyinto ingashintshwa ukuze Ubukhulu igebe ke eside ngokucophelela ohlangothini amagejambazo kuthiwa okhandwe ngesando phakathi umqhewu ngesando. Ububanzi umqhewu ihlukile yonke indawo, futhi kuyodingeka ilungiswe indiza. indlela Hard lidinga umzamo nokubekezela, kodwa iyona enokwethenjelwa kakhulu.
Ngaphambi strip okulungiselelwe usufakwa slot, lapho kuthululwe glue. Abamelana ngosuku, igebe is sihlanza futhi usulungele ukupenda.
Ukuhlela ukukhanda ezindlini ngezandla zabo, qaphela ukuthi kukhona izindlela ezingavamile kakhulu, njengomdlavuza ngokugcwalisa imifantu ne itiyela ashisayo. Kodwa kungenye into ehluke kakhulu ezibizayo, zingcolile futhi isikhathi esiningi. Kuyaziwa ukuthi indlela olukhulu ukuze kungabonakali yonke imifantu kanye evele engalingani - ngiyibeka nge ipulangwe. Umthelela le nqubo kuyoba isikhathi eside kunazo zonke.
"Aquatex Ezingeziwe" - option best for ukuvikelwa ezishelelayo lokhuni
The best amafilimu Italy: igama, izincazelo, izindaba, izilinganiso nokubuyekezwa
Amapharamitha, ukuphakama, isisindo Anne Khil'kevich. Uneminyaka emingaki Anna Khil'kevich?
Bonusmall - isehlukaniso noma cha? Bonusmall kanjani?